သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသော မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြုအမူ (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသော မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြုအမူ (၁၀)ခု
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသော မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြုအမူ (၁၀)ခု
ကျွန်တော်တို့ အိပ်ရာက စောစောမထတဲ့အခါ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနေတဲ့အခါ ပီကေဝါးနေတဲ့အခါ(ဒါမှမဟုတ်) အခန်းထဲမှာ ညစ်ပတ်ရှုပ်ပွအောင်နေတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူး၊ အပျင်းကြီးတယ်။ တာဝန်မဲ့တယ်လို့ စည်းကမ်းကြီးတဲ့ မိဘတွေက ဆိုကြပါတယ်နော်။ တခါတလေမှာ ဒီလို ‘အဖျက်’လုပ်ဆောင်မှုများက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်၊ ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ ကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ မှတ်ထားရမယ့် အရေးကြီးဆုံးအရာက အရာရာတိုင်းကို အစွန်းမရောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရလဒ်အချို့ တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
၁။ ပီကေဝါးခြင်း (စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကို လျော့နည်းစေပြီး မှတ်ဉာဏ်တိုးတတ်စေပါတယ်)
စာဖတ်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုရှိသလိုပဲ ပီကေဝါးခြင်းက မှတ်ဉာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ နိုးကြားမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
လေ့လာမှုများက စမ်းသပ်မှုအတွင်း ပီကေဝါးခဲ့သူတွေဟာ ရေတိုမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုပေါ်မှာ ၂၄% ၊ ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုပေါ်မှာ ၃၆% ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ တခြားလေ့လာမှုမှာ ပီကေဝါးခြင်းက ကော်တီဇုန်ဟော်မုန်းကို လျော့ကျစေတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။
၂။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း (ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်ပြီး သင်ယူနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်စေပါတယ်)
Fast-paced လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေဟာ ဉာဏ်ရည် ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်က ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှုမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိန်နဲ့ မြန်မြန်ဆော့ရတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သင်ယူနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ ဒီသက်ရောက်မှုများက မြန်မြန်လှုပ်ရှားရတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာသာ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
၃။ ကျိန်ဆဲခြင်း (စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး နာကျင်မှုကို သည်းခံနိုင်စွမ်း တိုးပွားစေပါတယ်
လူအများစုက ကျိန်ဆဲခြင်းဟာ မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်လို့ လက်ခံထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးမှာ ကျိန်ဆဲခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး စိတ်ပျက်မှုကို ဖယ်ရှားဖို့ ကူညီနိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နာကျင်မှုကို သည်းခံစိတ် တိုးမြင့်နိုင်ကြောင်း Keele တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာကျောင်းက ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။
၄။ ရှုပ်ရှုပ်ပွပွနေခြင်း (ဖန်တီးမှုကို မြှင့်တင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်)
သင့်မေမေက ရှုပ်ရှုပ်ပွပွ နေတာဟာ မကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်လက္ခဏာ၊ စနစ်မရှိ၊ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ အမူအကျင့်လို့ အမြဲတမ်းပြောတာကို မှတ်မိမှာပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှုပ်ရှုပ်ပွပွနေတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်များဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွင်းမှာ ပုန်းအောင်းနေတဲ့ ဖန်တီးမှုဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
၅။ အိပ်စက်ခြင်း (နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုနှင့် လေဖြတ်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်)
စောစောအိပ်ရာထသူဟာ နည်းနည်းကြာကြာအိပ်သူကို ဝီရိယမရှိသူ၊ ပျင်းရိသူလို့ အပြစ်တင်လိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ စောစောထတာဟာ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစေပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ စောစောအိပ်ရာထသူဟာ သွေးတိုးမှု အန္တရာယ် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပြီး သွေးတိုးရောဂါ၊ heart attack၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် သွေးကြောတွေ တင်းမာခြင်းကို တွေ့ကြုံခံစားရဖွယ် များနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပေးပါနော်။
၆။ အတင်းအဖျင်းပြောခြင်း (မိတ်ဆွေရပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေပါတယ်)
သူများအတင်းပြောခြင်းက မယုံကြည်ရတဲ့သူ၊ ယုတ်မာတဲ့သူလို့ သုံးသပ်ကြပေမယ့် ဒါက ကျွန်တော်တို့အတွက် အပြုသဘောလွှမ်းမိုးမှု ရှိပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသနက အတင်းအဖျင်းပြောခြင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သံယောဇဉ်ကို တိုးစေပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ကြီးထွားစေကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် သောကများကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ပူးပေါင်းအတင်းပြောတဲ့ အဖွဲ့ဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုကို ဟန်တားပေးပြီး လှုမှုရေး သတင်းအချက်အလက်တွေ ကောင်းကောင်း ဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ လေချဉ်တက်ခြင်း (အစာအိမ်နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်)
လေချဉ်တတ်တာက ရွံစရာကောင်းတဲ့ အသံဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစာခြေလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါက အစာအိမ်ထဲမှာ စုဆောင်းထားတဲ့ မလိုအပ်သောဂတ်စ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကောင်းမွနတဲ့ အစာအိမ်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကူညီပါတယ်။ ရင်ပူတာတွေကင်းဝေးဖို့ လေချဉ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်။
၈။ ရေမချိုးခြင်း (အသားအရေကို နူးညံပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်)
နေ့တိုင်းရေချိုးဖို့ ပုံမှန်ပြောနေတဲ့ မေ့မေ့ကို ရေချိုးပျင်းတဲ့အကျင့်က နည်းနည်းကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြောပြလိုက်ပါနော်။ အထူးသဖြင့် ရေပူနှင့် နေ့တိုင်းရေချိုးခြင်းက အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေပြီး အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာစေပါတယ်။ သင်ဟာရက်ခြား ရေချိုးတယ်ဆိုရင် သင့်အသားအရေဟာ ၎င်းရဲ့ သဘာဝအဆီကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အသားအရေနူးညံ့ တောက်ပလာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆပ်ပြာနဲ့ နေ့တိုင်းရေချိုးသူတွေဟာ သဘာဝအင်တီဘိုင်အိုတစ် တစ်ခုအဖြစ် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်လုပ်တဲ ကောင်းမွန်သော ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေပါတယ်။ ရေချိုးနည်းခြင်းက ဒီဘက်တီးရီးယားများကို အသားအရေပေါ်မှာ ကြာရှည်နေစေပြီး အသားအရေကျန်းမာဖို့ ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
၉။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးခြင်း (စိတ်ခံစားမှုကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ချိတ်ဆက်သလို ခံစားရစေပါတယ်)
ဆိုရှယ်မီဒီယာက မကောင်းဘူးလို့ ဆိုကြပေမယ့် သုံးတတ်ရင် ကောင်းကျိုးတွေများကြီးရပါတယ်နော်။ သင့်ရဲ့ဘဝနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအပေါ် အပြုသဘော သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာက အထီးကျန်မှုကို လျော့နည်းပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပိုပြီးချိတ်ဆက်မှု ခံစားရစေပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ မတူညီတဲ့ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုတွေကို မျှဝေခြင်းဖြင့် စိတ်အားထက်သန်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
၁၀။ ရေအေးအေးချိုးခြင်း (သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်)
ရေအေးအေးအောက်မှာ ရေချိုးခြင်းက သင့်ကို ချက်ချင်းနေမကောင်းဖြစ်စေလိမ်မယ်လို့ တွေးမိမှာပါ။ ရေအေးအေးနှင့် ချိုးခြင်းက တကယ်တော့ ယူရစ်အက်ဆစ် လယ်ဗယ်လျှော့ချမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ ၎င်းက သွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကို ရှင်းလင်းပေးပြီး သွေးတိုးမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေအေးချိုးသူများဟာ အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေပါတယ်။
ဒီအလေ့အကျင့်လေးတွေ သင့်မှာရှိပါသလား? သင့်ကို အများဆုံးစပရိုက်ဖြစ်စေတာ ဘယ်အချက်တွေပါလဲ? မှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Previous articleHIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို အမြစ်ပြကုသနိုင်တဲ့ နည်းပညာ သုတေသနပညာရှင်များ စမ်းသပ်အောင်မြင်
Next articleဗိုက်ချပ်ပြီး ခါးသေးစေဖို့အတွက် ၂၈ ရက်စာ workout plan